Maamulka Puntland Oo Ka Hadlay roobab dabaylo wato oo ku dhuftay Deegaanno Ka Mid Ah Puntland – Radio Muqdisho
Maamulka Puntland Oo Ka Hadlay roobab dabaylo wato oo ku dhuftay Deegaanno Ka Mid Ah Puntland
Madaxwweynaha Dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo warbaahinta kula hadlay aqalka Madaxtooyada Puntland ee Garoowe ayaa sheegay in roobab dabaylo wato ay ku dhufteen qeybo kamid ah Gobalada Puntland, saameyn xooglehna geysteen.
Madaxweynaha Maamulka Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa guud ahaan shacabka Puntland ugu baaqay in kaalintooda ay ka qaataan gurmadka loo fidinayo dadka deeganadaasi, iyagoona ku hal qabsanaya halkudhigii madaxweynaha ee ahaa Puntland ha isku tashato.
‘’ Beesha caalamka waxaan ka codsnaynaa inay taageero ka geystaan baahida dadkaas la soo daristay sida cuntada , hoyga , caafimaadka iyo wixii lamid ah ‘’ Ayuu yiri Madaxweynaha Maamulka Puntland.
Dr Gaas ayaa ugu dambeyn sheegay in Dawladda Puntland dhankeeda qaadanayso waajibaadka dastuuriga ah ee kaga aadan u kaalmeyta dadka deeganadaasi ee ay saameysay duufaantu .
Madaxweyneyaasha Soomaaliya iyo Djibouti oo ka wadahadley iskaashiga amniga gobolka, iyo xoojinta xiriirka labada dal “Sawirro”
Ku-simaha R. Wasaaraha oo qaabilay wafdi ka socday dowladda Sweden “Sawirro”
Ku-simaha R. Wasaaraha oo qaabilay wafdi ka socday dowladda Sweden "Sawirro"